वार्षिक १० अर्बको दूध आयात (भिडियोसहित) « Janata Samachar
वार्षिक १० अर्बको दूध आयात (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति :7January, 2019 3:06 pm
दुग्धजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान छ भने देशभरका ३५ ठूला डेरी उद्योगहरु दुग्धजन्य उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले स्वदेशमै १२ लिटर दूधबाट एक किलो पाउडर दूध उत्पादन गरेरसमेत दुर्गम र विकट भूगोलमा दुग्धजन्य उत्पादन पु¥याउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
तर राज्यको कुरा गर्ने हो भने न भएको दुग्ध विकास संस्थान पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल भइरहेको छ न त निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगहरुलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छ । दुग्ध उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आधार भइरहँदा राज्यकै अकर्मण्यताका कारण घाटा सहेर डेरी उद्योग सेवा दिइरहेका छन् ।
देशभर ठूला ३५ डेरी उद्योगले दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र वितरणमार्फत देशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका हुन् । अस्थिर कृषि नीतिका कारण नेपाली डेरी उद्योग धरासायी बनिरहेका छन् । यही अस्थिर नीतिको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा हरेक वर्ष वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ ।
२०७४ फागुनदेखि पुनः सञ्चालित चितवन मिल्कको घाटाको कुरा गर्ने हो भने डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । तर उद्योगले दैनिक १ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरिरहेको छ । उद्योगको २ लाख ५० हजार लिटर दूध प्रशोधन क्षमता छ । दैनिक ३५ टन उत्पादन कोल्ड स्टोर क्षमता बढाएर २ सय टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण जरुरी छ । १२ लिटर दूधबाट १ केजी पाउडर र साेही दुधबाट ५ केजी नाैनी दूध उत्पादन गरिरहेका डेरी उद्योगहरु अनेक समस्या खेपेर उद्योग चलाइरहेका छन् । चितवन मिल्कका अध्यक्ष राजुबावु श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘राज्यको कृषि नीतिमा लगातार फेरबदलले ठूलो लगानी भएका डेरी उद्योग संकटमा छन् अनि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ ।’
यस्तै, अर्को डेरी पुष्प डेरीका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पराज बस्नेत स्वदेशमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ भन्दा भारतलगायतका देशबाट आयातीत दूग्धजन्य पदार्थ प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ सस्तो हुँदा मुलुकमा दुग्धव्यवसायमा भविष्य खोजिरहेका उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु हुन्छ । भन्नुहुन्छ, ‘राज्यले कम्तीमा प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ अनुदान दिन सके स्वदेशी दुग्ध उद्योगहरु दुग्ध आयात बन्द गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने हुन्छन् ।’
अघिल्लो साता देशका केही प्रमुख शहरका डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थान अनुगमन भए । अनुगमन, अध्ययन भ्रमणमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो । दुग्ध विकास संस्थान सुध्रियो कि सुध्रिएन, चासो यो पनि थियो । नेपाली किसानको उत्पादन खेर नजाओस् भनेर पाउडर दूध आयात निरुत्साहित बनाउने भनिएको छ ।
निजीक्षेत्रले त बजारमा भारतीय उत्पादन र सरकारी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान भने पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न त परको कुरा उत्पादित सामग्रीसमेत गोदाम थन्क्याएर बसेको पाइएको छ ।
विराटनगरस्थित दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक ६० हजार लिटर दूध उत्पादन क्षमता राख्छ । तर उत्पादन भइरहेको छ दैनिक ३६ हजार लिटर । अनि बजारीकरण पनि सहज छैन ।
जम्मा ६ प्रतिशत अनुदान दिने हो भने हामी १० अर्ब रुपैयाँको दुग्जन्य आयात रोक्न सक्छौँ । अनि डेरी उद्योगहरु दूधमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । दुग्ध विकास संस्थानले पनि आफ्ना क्षमता अनुसार दूग्धजन्य उत्पादन बजारमा पु¥याउन सके स्वतः विदेशी आयात रोक्न मदत पुग्ने देखिन्छ । तर डेरी उद्योगीको माग ६ प्रतिशत अनुदान कहिले होला पूरा ?
कर्णाली प्रदेश अगाडि, ल्यायो ३४ अर्ब
मुलुकका सात वटै प्रदेशले आज बजेट सावैजनिक गर्दैछन् । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि सातवटै
इजरायलबाट ‘मेगा रेमिट’ सेवा शुरु
मेगा बैंकले ‘मेगा रेमिट’ सेवा इजरायलबाट पनि शुरु गरेको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ को लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत
प्रहरीले ल्यायाे कार्गेड मोटरसाइकल, मूल्य कति ?
अबको केही समयमा कम्पनीले उक्त मोटरसाइकल नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
बस र माइक्रोमा पकेट मार्ने ८२…
प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा संचालित विभिन्न बस तथा माइक्रोका यात्रुको पकेट मार्ने ८२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
‘सरकार बदल्न चलखेल’
नेताहरुको कमीकमजोरीबाट बाह्य शक्तिले नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । तीनै शक्ति केन्द्रसँगको मिलिमतोमा सरकार समीकरण फेरबदल गर्ने प्रसङ्ग समेत उठ्न…
गुठी विधेयकविरुद्ध हिन्दू युवा संघ पनि…
हिन्दू युवा संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि उपत्यका बन्द सम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मुलुकका सात वटै प्रदेशले आज बजेट सावैजनिक गर्दैछन् । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि सातवटै प्रदेशले दोस्रोपटक बजेट प्रस्तुत छन्…
खेम बम काठमाडौं । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख महादेव बजगाईंले जनताले अनुभुति गर्नेगरी विकासको खाका तयार भएको बताउनुभएको छ ।…
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि विधेयकविरुद्ध उत्रनुस्’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध उत्रिन आव्हान गर्नुभएको छ…
तपाईंको यो साता (असार १ देखि ७ गतेसम्मको राशिफल)
बस र माइक्रोमा पकेट मार्ने ८२ जना पक्राउ
‘लुभुमा सुकुन्दा चलचित्र महोत्सव’
गुठी विधेयकविरुद्ध हिन्दू युवा संघ पनि आन्दोलनमा उत्रियो